Wonke umuntu ufuna kwezezindlu yayo abe nempahla amahle zemvelo. Nokho, ziyisici ezibizayo futhi musa njalo sihambisana engenayo emndenini. ke Kungenzeka kanjani? Abakhiqizi zinikeza okunye - yokwakha yaseGrisi sekugcineni.
Yokwakha yaseGrisi - isiqeshana ishidi ezondile yemvelo izinkuni, okuyinto etholakala ukusika isiqu nge. Kulokhu, amaphethini zemvelo ivelele bha ngiwunike ukubukeka wokupha. Le nto has a ububanzi ebanzi:
ihlobise mbumbulu ifenisha;
Ekuqaleni le yokwakha yaseGrisi XIX leminyaka baqala ukusebenzisa ekukhiqizweni. It is ngokushesha impela kwakuqala ukwanda futhi cishe esikhundleni izinkuni zemvelo ezibizayo.
izinhlobo yokwakha yaseGrisi
"Yokwakha yaseGrisi" - kuyinto Gnostic. Le nto has izinhlobonhlobo eziningi. Umehluko amanga endleleni ukusika, ukusetshenziswa kohlobo oluthile ukhuni indlela enza.
Imi uhlobo inquma iphethini elilandelayo eshidini imihlobiso, kuye ngokuthi isiqondiso cutting of yonyaka isihlahla izindandatho. Ukuze uthole isibonelo ngabanye, usebenzisa izindlela ezilandelayo:
Tangential - banqunywa ngokusahwa kude kusukela emgqonyeni core ngesikhathi tangent. It has a ongaphakeme ukukhiqizwa izindleko, iphethini abahlukene mihlobiso futhi ukuthungwa ahlukile.
Radical - sihamba kahle phakathi isiqu. Izimfanelo ishidi siphakeme ngokwanele, isakhiwo eyohlobo. Ukumelana izindlela ezahlukene umthelela umthelela esigcwele ku izindleko zalo okusezingeni eliphezulu.
Kuye processing indlela zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezintathu eziyinhloko:
yokwakha yaseGrisi lithi wanqunywa ekhiqizwa on ekhethekile ephezulu ukucacisa lathe ukuqoqwa, isethiwe mayelana 20 isaha izindwani. Imishini enjalo ivumela ukusika kakhulu ngokulinganayo amashidi. Ngakho, ngamunye kubo ine ukujiya elikhulu lapho enquma ukuqina yayo. Lolu hlobo isetshenziswa womshini multi-ungqimba amapulangwe aphansi kanye iminyango. Yokwakha yaseGrisi banqunywa ngokusahwa Ubuningi bamahora amelana umonakalo mechanical, ukunika amandla ukubuyisela ebusweni ngaphandle esikhundleni ungqimba engenhla.
yokwakha yaseGrisi lisikiwe senziwa ovundlile Planer. Inqubo ngokwaso senzeka ngosizo ummese, run on uvalwe ukulungisa isiqu esihlahleni. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka ukujiya lewebhu kusuka 0.3 mm kuya ku-30 mm. Kabanzi asetshenziswe ekukhiqizeni ifenisha kanye umhlobiso mbumbulu ahlukahlukene.
yokwakha yaseGrisi ehlutshiwe. AmaSpredishithi oluqanjwe razluschivaniya iDemo ubude izinkuni ngesikhathi eziklanyelwe lolu injongo umshini. Ngokuvamile lolu hlobo imihlobiso esetshenziselwa ulwelwesi kanye veneering. Ngokusetshenziswa izindwani ezikhethekile nge onqenqemeni mihlobiso, kuvela isithombe sokuqala ku-canvas.
uhlobo izinkuni ukwenza imihlobiso
Uhlobo ukhuni esetshenziswa asithinti nje kuphela izinga material, kodwa futhi ku nombala engokwemvelo. Yokwakha yaseGrisi ekhiqizwa kusukela cishe zonke izinhlobo zokhuni, ezifana Poplar, umnqumo, apula, beech. Khona-ke abakhululiwe ezivamile:
Walnut yokwakha yaseGrisi - eliphezulu ezisetshenziswa womshini iminyango, Amaphiyano, ifenisha, njengoba ngokuvamile isetshenziswa ezihlukahlukene joinery. Ububanzi umbala wehlukile. Kungaba lisukela ukukhanya ubumba amathoni sethunzi lokufa, isib, ensundu.
Wenge yokwakha yaseGrisi. Uma ekukhiqizeni yayo zithathwa abasha ukhuni izingqimba, umbala omhlophe eliphaphathekile; amashidi core - ngezibuko ezihlukile Ngaphakathi anombala onsundu. Ububanzi main kwesicelo yayo - ebhekene amafasitela, ifenisha. Kwangezikhathi yalesi sihlahla ube ukuqina okusezingeni eliphezulu, ngakho avame ukusetshenziswa womshini Uthwale phansi.
Oak yokwakha yaseGrisi - le isikhathi eside kakhulu, ethembekile futhi iqine. It has a izindleko kahle eliphezulu, kodwa ukusebenza ufaneleke ngokugcwele. Palette imibala ihlukile, shades kusukela beige ukukhanya kuya konsundu. Kabanzi joinery abasemazingeni ahlukahlukene.
Yokwakha yaseGrisi cherry izinkuni has a ukubukeka esihle ngokubabazekayo, ngakho kubalulekile kakhulu yokuqedela of ifenisha kanokusho. Iphalethi yakhe ubuswa umbala obomvu - kusukela orange okunjengomlilo ubomvu omnyama.
Veneered iminyango ingaphakathi
Okwamanje, iminyango ingaphakathi ezenziwe ngokhuni okuqinile abalahlekelwe ukuqondana abo. Bona kwathathelwa indawo imodeli engasindi kakhulu futhi ezingabizi. Empeleni, leli qiniso kungenxa ubukhulu kwezakhiwo: abahlala efulethini ejwayelekile, bambalwa abantu ngeke ufake iminyango omkhulu wokhuni. ezindaweni ezincane Nakuba zinamandla endaweni enhle, kodwa bheka besiyoba sikhulu kakhulu. Manje abantu bakhetha umklamo obunobunye futhi original, okuyinto kwasekuqaleni kulula futhi esiphezulu isikhala, ngakho bazama ukusungula iminyango amahle ingaphakathi. Yokwakha yaseGrisi - a ukwaziswa kungaba angena iyiphi iphrojekthi design, ngesikhathi esifanayo enikeza engokwemvelo ye endaweni ezungezile, ngaphandle enesisindo ke.
Lolu hlobo yokuqedela uyisango-to-date njengoba ngezindleko eziphansi kunzima kakhulu ukuhlukanisa ngokubona kusukela okhunini oluqinile.
Izici iminyango ingaphakathi
The main nendlela ukukhethwa iminyango ingaphakathi - non-ukufana umbala, amanani aphansi, ukusebenziseka kanye okusuka somklamo. Kuyinto ukuqaliswa zonke lezi zinto kuyosiza ukwenza igumbi ukukhanya nobunye, futhi ugcine okuqukethwe zemali Sebawoti.
Ukuze ilungiselelo afanele isikhala ephilayo udinga ukukhetha ilungelo iminyango ingaphakathi. Imihlobiso, uma siqhathanisa nabanye izinhlobo ambozwe, ukubhekana kakhulu ngempumelelo umsebenzi. Izinzuzo yakhe obungenakuphikwa yiphethini esiyingqayizivele, imibala yemvelo, okusezingeni eliphezulu bafake ukumelana naso, lo kungenzeka of kabusha ngaphandle esikhundleni. Ngemva ukwelashwa surface nge lacquer ekhethekile veneered iminyango ukubekezelela kunomswakama futhi kulula ukugeza.
Interior iminyango kusukela MDF yokwakha yaseGrisi
MDF, yokwakha yaseGrisi - yilezo izinto okuyinto, ngenxa izakhiwo zabo, baye baba impumelelo okufana esikhundleni izinkuni zemvelo, futhi lapho izinto kuhlanganiswe etholakala eliphezulu, akuzona wawungaphansi prototype zemvelo.
Ukuze kunyatheliswe veneered MDF umnyango, isu elikhethekile isetshenziselwa umfutho ophakeme futhi lokushisa. Lokho kunikeza izakhiwo impahla ezifana nokwethenjelwa, ukusebenziseka nokuqina kwayo. Ngenxa eliphezulu kakhulu bale ukuminyana futhi iminyango umswakama-bonakaliso are cishe hhayi likhubazeke. Kuqhathaniswa ukhuni onobuhle ziyasebenziseka ngaphezulu. Izinzuzo zabo yilezi: isisindo ukukhanya, ukubukeka yobuhle nokuphila isikhathi eside.
Yokwakha yaseGrisi - a yokuqedela impahla yesimanje, lapho esanda ukubekwa kabanzi yokuqedela okuhluke kakhulu futhi umsebenzi wokubaza. Kule minyaka edlule, uye wakwazi ukumisa ngokwayo kuphela onesandla umhlabeleli, futhi yikho okuvame kakhulu futhi ethandwa kuze kube yilolu suku.
Ikhishi "Maria": impendulo izinga kanye nenkampani service
EBurma engcwele (cat zohlobo): incazelo, izithombe kanye uhlamvu